DAAWO: Liverpool Oo Lagu Dhegey Kulankeedii Ugu Horyeeyey Ee Horyaalka Xili Ay………………….. | TOP NEWS
DAAWO: Liverpool Oo Lagu Dhegey Kulankeedii Ugu Horyeeyey Ee Horyaalka Xili Ay…………………..
Liverpool ayaa barbardhac lagu qabtay kulankoodii furitaanka horyaalka England Premier League ee xilli ciyaareedkaan kulan lix gool la iska dhaliyey oo ka dhacay garoonka kooxda Watford ee Vicarage Road.
Watford ayaa hogaanka u qabatay kulankaan daqiiqadii 8aad waxaana goolkaas madax ugu dhaliyey weeraryahankooda Stefano Okaka Chuka oo u dhashay dalka Italy, waxaana ay aheyd koorno uu soo qaaday Jose Holebas.
Sadio Mane ayaase daqiiqadii 29aad goolka barbardhaca u dhaliyey kooxda Liverpool, xiddiga reer Senegal ayaa si wanaagsan ula soo ciyaaray xiddigaha kooxdiisa gaar ahaan Alvaro Mareno iyo Emre Can ka hor inta uusan shabaqa gees ka toogan.
Sadio Mané ayaa dhaliyey darbadiisii ugu horreysay ee uu shabaqa ku abaaray ciyaarta furitaanka horyaalka England Premier League xilli ciyaareedkii 2016 illaa 2017 iyo xilli ciyaareedkaan 2017 illaa 2018.
Seddax daqiiqo ka dibse, Watford ayaa hogaanka u qabatay kulankaan, iyadoo ka mahdineysa gool uu u dhaliyey xiddigooda qadka dhexe ee reer France Abdoulaye Doucoure kaasoo ka faa’iideystay qalad ay galeen daafacyada Liverpool.
Qeybtii hore ee kulankaan waxaa lagu kala nastay natiijadaas 2-1 ah ee ay hogaanka ku heysay kooxda martida loo ahaa.
Daqiiqadii 55aad ee qeybtii labaad, Liverpool ayaa goolkeeda barbardhaca oo rigoore ahaa ka heshay xiddiga weerarka ka ciyaara ee reer Brazil Roberto Firmino iyadoo rigooradaan lagu galay Mahamed Salah.
Ka dibna Mohamed Salah ayaa hogaanka ciyaarta u dhiibay Reds, isagoo caawinaad ka helay Roberto Firmino, waana goolkiisii ugu horreeyey ee uu ciyaar rasmi ah u dhaliyey kooxda Liverpool.
Mohamed Salah ayaa wuxuu noqday ciyaaryahankii 12aad ee kala duwan kaasoo gool u dhaliya kooxda Liverpool ciyaartiisa ugu horreysa ee horyaalka England Premier League.
Kooxaha Watford iyo Liverpool ayaa iska dhaliyey dhammaan shantii kubadood ee ugu horreysay ee ay shabaqa ku abbaareen.
Weerarka kooxda Liverpool Mane, Salah iyo Farmino (MSF) ayaana shaqaba soo taabtay dhammaantood balse guul kuma aysan hogaamin kooxda Liverpool maadaama ay Watford goolkeeda barbardhaca ka heshay Miguel Britos daqiiqadii 93aad ee kulankaan, ciyaarta ayaana natiijo ahaan 3-3 kusoo dhammaatay.
DAAWO: Liverpool Oo Lagu Dhegey Kulankeedii Ugu Horyeeyey Ee Horyaalka Xili Ay………………….. added by Tifaftiraha Ciyaaraha on August 12, 2017